Guddiga Xadaynta Qalfoofka Qaaradda
Kenya oo Xogteeda QM ka hor Akhrisay, Cuskatayna Heshiiskii Is-afgarad iyo Warqadii Loo Saxiixay Cumar C/rashiid
Shabakadda Qarammada Midoobey qaybteeda xeerarka Badaha adduunka ayaa October 30, 2009 waxaa lagu faafiyey qoraal ka soo baxay Guddoomiyaha Guddiga Xadaynta Qalfoofka Qaaradda. Qoraalkaas oo tibaaxay halka uu marayo go'aan ka gaaristii akhbaartii la xiriirtey xuduudaha baddaha ee ay dalalku u gudbiyeen guddigaas.
Warbixinta waxaa lagu xusay in Guddiga (QM) ay ka baaraan degeen akhbaarta la xiriirta Qalfoofka Qaaradda ee ay dalalku u soo gudbiyeen, ayagoo adeegsanaya shay-barka aaladda GIS (Geographic Information Systems) ayey si farsamo ahaan u eegeen akhbaarta loo gudbiyey, ayadoo la raacayey Qodobka Article 76, farqaddiisa sideedaad (paragraph 8) ee xeerka QM ee Sharciga Badda. (Qodobkaasi waxa uu ku saabsan yahay in dalalka xeebaha leh ay QM u gudbistaan cabbirka Qalfoofka Qaaradda wixii ka durugsan 200 mayl badeed.)
Waxa kale oo Ms. Nkoroi ay Guddiga QM u sheegtay in wada-xaajoodyada aan weli go'aanka laga gaarin ee Kenya kala dhexeeya Dawladda Federaalka Kumeelgaarka ee Jamhuuriyadda Soomaaliya, waxaa laga gaaray qorshayaal la maareeyey oo ku-meel-gaar ah, ee xag farsamo, ayadoo la xeerinayo Qodobka Article 83, farqaddiisa Paragraph 3, ee xeerka Qarammada Midoobay ee Baddaha. Qorshayaasha la maareeyey waxay ku qoran yihiin Is-fahamkii MoU (Memorandum of Understanding) ee la saxiixay 7 April 2009, taas oo (Labada dal) ay isla garteen in aan midna kan kale diidmo ka hor geyn xogta ay Gudbisanayeen, ayey tiri. Arrintaas mid la xiriirta ayadoo muujineysey, Ms. Nkoroi waxay farta ku fiiqday qoraal kayimid Soomaaliya oo ku taariikhaysan 19 August 2009 kaas oo ay sheegtay in uu waafaqayo Heshiiska Is-fahamka (MoU), waxayna intaas ku dartay in qoraalkaasi (19/8/2009 waa warqaddii loo saxiixay Cumar C/rashiid) uu xaqiijiyey in marka la gaaro waqtiga ku haboon, la isku duba ridi doono nidaam lagu gaba gabaynayo wada-xaajoodka xuduudda Badda ee Soomaaliya.
Kenya markii ay akhbaartooda ka hor akhriyeen, kaddib waxaa Guddiga Xadaynta Qalfoofka Qaaraddu uu yeeshay shir gaar ah oo albaabadu u xiran yihiin (private). Waxayna falanqeeyeen qaabka farsamo ee ay u wajahayaan xogtaas loo soo gudbiyey. Guddugu waxa ay go'aansadeen, ayagoo xeerinaya Qodobka Article 5 ee Annex II ee Xeerka QM ee Badaha Adduunka iyo qodobka Rule 42 ee xeerarka Nidaamka Guddiga Xadaynta Qalfoofka Qaaradda, in akhbaartaas la soo gudbiyey ka baaraan-deggeeda loo saaro Guddi-Hoosaadyo lagu asaasayo ayadoo la xeerinayo Qodobka Rule 51, farqaddiisa paragraph 4 ter, ee xeerarka Nidaamka Guddiga Xadaynya Qalfoofka Qaaradda. (Macnaha qodobada iyo xeerarka la xusay oo faahfaahsan hoos ayaan ku arki doonaa.)
Guddi hoosaadku waxay go'aanka u gudbin doonaan Guddiga QM oo markaas heer wada jir ah go'aan rasmi ah uga gaari doona akhbaarta la soo gudbiyey sida ay u soo kala horeeyaana u eegaya.
Dhanka kale, waxaa dhici karta in maskaxda akhristaha ay ku soo degdegi karto su'aasha ah: Aaway hadalkii ku qornaa Heshiiskii Is- Afgarad (MoU) ee Kenya ku dooneysey in muran badeed geliso dhulka Soomaaliyeed? - Taas waxaa jawaab u ah: Kenya waxay ugu muuqataa hadda in ay tabcadaas la heshay DFKMG iyo Soomaalida, waayo warqaddii MoU waxaa QM u gudbiyey Ra'iisul Wasaaraha DFKMG, waxaana ka mid ahaa hadalladii ku qoraa (No objection), oo ah DFKMG wax diidma ah kama qabto xogta Kenya gudbisatay. Waxaa kaloo loo qaadan karaa gudbinta Cumar C/rashiid in wixii ku qoraa MoU uusan waxba ka qabin maadaama uu gacantiisa ku gudbiyey, isla markaasna uu saxiixay wasiir ka mid golahiisa wasiirada. Halkaas waxay Kenya ka fahmi kartaa in Soomaaliya aysan 'muran' ka qabin in baddeeda la geliyey 'muran badeed'. Sidaasna ay markaas QM ugu sheegtay "in aysan jirin wax muran ah oo aan la xallin oo la xariira akhbaartii ay gudbisatey Kenya." Taas oo Kenya ula jeedi karto: DFKMG waxay aqbashay in baddoodu uu muran ku jiro, cabbirkii Kenya samaysatayna aysan waxba ka qabin Soomaaliya.
Kenya waxay Guddiga QM u sheegtay, waxa ay ugu yeertay wada-xaajoodyada aan weli go'aanka laga gaarin ee Kenya iyo Soomaaliya in laga gaaray qorshayaal la maareeyey oo ku-meel-gaar ah, ee xag farsamo. Markaas waxay Kenya xustay in ay tixraacayso Qodobka Article 83, farqaddiisa Paragraph 3, ee xeerka Qarammada Midoobay ee Baddaha.
Marka la dhuuxo hadalkaas, waa erayo loo adeegsado xagga sharciga oo salka ku haya in lagu kala bixi doono Sharciga Caalamiga ah (International Law) marka la isla tago Maxkamadda Caalamiga ah. Qodobka Article 83, farqaddiisa Paragraph 3 waxa ku cad in ay wanaagsan tahay in dalalku ay heshiiyaan. Dabcan markaas hadday heshiin waayaan waxaa la raacayaa qodobka 1-aad ee xeerkaas. Kaas oo dhigaya in Qalfoofka Qaaradda badda ee dalalka deriska ah uu saamayn ku yeelanayo heshiiska ku salaysan sharicga caalamiga ah, sida ku cad qodobka Article 38 ee Qaanuunka Maxkamadda Caalamiga ah. (Qodobkaasi waxa uu khuseeyaa in Maxkamadda Caalamiga ah ay go'aan ka gaarto muranka u dhexeeya dalalka).
Halkaas waxaa laga fahmi karaa in Kenya ay dooneyso in badda Soomaaliya ay geyso maxkamadda Caalamiga ah si loogu sharciyeeyo. Waxaa taas laga sii fahmi karaa in hadalka Kenya uu ku jiro erayada ah in qorshayaasha la maareeyey ee la isla gaarey ay ku xusan yihiin Heshiiska Is-afgarad ee ay kala saxiixdeen DFKMG iyo Kenya April 7, 2009. Waxay hadalkaas Kenya ku sii xoojisey ayadoo farta ku fiiqday qoraal kayimid Soomaaliya oo ku taariikhaysan 19 August 2009 kaas oo ay sheegtay in uu waafaqayo Heshiiska Is-fahamka (MoU). (FG: Qoraalka 19/8/2009 ee ay Kenya ka hadleyso oo taageerada ka dhiganeyso waa warqaddii loo saxiixay Cumar C/rashiid, ee qaar xildhibaanadda DFKMG kamid ah ay shir jaraa'id ku sheegeen in uu saxiixay Prof. Ibbi. Arrintaas weli ra'iisul wasaaraha DFKMG kama hadlin).
Waxaa shacabka Soomaaliyeed is weydiinayaan sababta ay DFKMG heshiis Is-faham ula geli weydey Yemen iyo Seychelles oo labadaba ay bad kala dhexeyso Soomaaliya. Labaduba waxay xogtooda gusbisteen iyagoo aan Soomaaliya heshiis iyo is-faham is-afgarad iyo MoU midna la gelin, waayo loomaba baahna, khasabna ma ahayn in dalalku galaan heshiis is-faham si xogtooda ay ugu dudbistaan UN-ka. Haddaba arrimahaas oo jira ayaan la fahmi karin sababta ay DFKMG u difaacdey heshiis aan wax faa'iido ahi ugu jirin shacabka Soomaaliyeed.
Arrinta khasaarada weyn ku fadhida waxay tahay in Baarlamaanka DFKMG diidmadoodii ay heshiiska Is-faham ku diideen aan laga hoos qaadin. Waayo haddii go'aankaasi gaari lahaa Qarammada Midoobey, markaas xukuumadda Kenya tixraac ahaan uma adeegsan lahayn heshiiska is faham.
Waxaa xusid mudan in baarlamaanka DFKMG ay go'aanka diidmada ah gaareen Agoosto 1, 2009. Kaddib, sida uu dhigayo dastuurka DFKMG, waxaa go'aankaas loo gudbiyey madaxweynaha DFKMG Sheikh Shariif Sheikh Axmed si uu u saxiixo oo markaas loogu gudbiyo hay'adaha ay khuseeyaan sida QM. Waxaa cad in warqaddii go'aankii baarlamaanka ku qoraa in aan laga qaadin miiska madaxweynaha DFKMG, waayo Kenya markii ay akhbaarteeda ka hor akhrineysey QM September 3, 2009, meelna laguma xusin diidmadii baarlamaanku WAXBA-KAMA-JIRAAN (NULL & VOID) kaga dhigeen Heshiiskii Is-afgarad ay Kenya tixraaca iyo taageerada ka dhiganayso. Tirada xubnaha baarlamaanka DFKMG waa 550 xildhibaan. Waxayna u dhaarteen in ay dhawrayaan danta Dadka iyo Dalka. Maxaa hadda arrimahaas kala gudboon baarlamaanka DFKMG? Jawaabta waxaa laga sugayaa 550 xildhibaan.
Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke oo Jaaliyadda Soomaaliyeed ee London la hadlayey October 28, 2009 ayaa markii ugu horeysey qiray in Heshiiskii Is-fahamka lagu khiyaameeyey xukuumaddiisa - Waxa uu yiri: "Kenya waa run waxay damacsan tahay in ay khalado xuduudka badda sida uu yahay... Kenya waxay runtii VIOLATION ku samaysay International Law..." . Laakiin ilaa hadda xukuumadiisu diidmo ku saabsan heshiiskaas Is-faham uma gudbin Guddiga Qarammada Midoobey. Maxaa hadda la gudboon Ra'iisul wasaaraha DFKMG? Jawaabta isagaa laga sugayaa.
Madaxweynaha DFKMG oo Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Minnesota la haadlayey October 4, 2009 ayaa sheegay in arrinta heshiiska Is-afgarad ee had iyo jeer laga hadlo ay tahay DACAAYAD - Waxa uu yiri: "Dacayadaha waxaa ka mid ah, dhul ayaa la gatay, bad ayaa la gatay, annagu waxaan u nimid oo dawladdani u timidey in ay wax hagaajiso, in ay horumar samayso, laakiin uma imaanin in ay bad iibsato....". Hadda haddii uu arkay in arrintu aysan dacaayad ahayn, oo xitaa ra'iisul wasaarahiisii uu qiray in Kenya ay Violation ama Ku xadgudub ku samaysay Sharciga Caalamiga ah, oo Kenya doonayso in ay Khalado xuduudda, haddaba maxaa la gudboon Sheikh Shariif? Jawaabta isagaa laga sugayaa.
T- In si dag dag ah DFK ay shir jaraa'id u qabato ay ku cambaaraynayso damaca Kenya, ayna ku xusayso inay kusoo xadgudubtay Badda Soomaaliyeed. Ugu yaraana xusayso in Kenya ay hadda ka baxday Is-afgaradkii Caruusha.
Waxaan dhayalsi lahayn in haddii arrimaha ku saabsan damaca Kenya aysan jawaab adag oo rasmi ah ka bixin Baarlamaanka, Ra'iisul wasaaraha iyo Madaxweynaha DFKMG in markaas ay halis ugu jirto badda Soomaaliyeed in Kenya looga sharciyeeyo Maxkamadda Caalimiga ee Adduunka.
X- Arinta aadka muhiimka u ah ee loo bahan yahay waa in Soomaaliya si deg deg ah u magacowdo khuburo Soomaaliyeed oo kakooban Qareenno Sharciyada badda ku takhasusay, khuburo dhinaca Juquraafiga ah, khuburo cilmiga Badda aqoon u leh gaar ahaan Qalfoofka Qaarada, Taariikh-yahanno xagga badaha, iyo Saraakiil garanaya ama horay ula soo shaqeeyey QM fahmina kara Eraybixinta Qaanuunuga ah, sidoo kale fahamsan haddii lagu fursan waayo Maxkamada Caalamiga ah sida ay u shaqayso. Sidaas waxaan ugu talinaynaa kaddib markaan derisnay dhinaca Kenya khubarada ka soo jeeda iyo baaxadooda xirfadeed ee howshaan u baahan tahay. Fadlan markale akhri khuburada Kenya usoo xushay inay Soomaaliya ka goostaan 116,000km oo laba Jibaaran. Akhbaartaas Kenya waxaa QM u bandhigay Wanjuki Muchemi, gacanyaraha Qareenka Guud ee Kenya (Solicitor General) iyo Juster Nkoroi oo Guddoomiye u ah Kooxda Hawlgalka (Task Force) ee Kenya hore ugu xilsaartay xadaynta Qalfoofka Qaaradda , iyo Simon Njuguna oo ah Juquraafi yaqaan, kuna takhasusay cilmiga GIS. Waftiga Kenya waxa kale oo ka mid ahaa tiro khubaro ah oo isugu jira Saynis yahanno, lataliyaal Sharciga iyo lataliyaal xagga farsamada.
(Tixraac cilmi baaristii SomaliTalk ee April).
4- Inay isha ku hayaan wadammada badda lawadaaga Soomaaliya inay soo durkeen iyo in kale sida; Kenya, Yemen, Sychelles, Maldives iyo Hindiya, sidoo kalena ay lasocdaan xogta ay u soo gudbiyaan Qarammada midoobay oo cadaynaysa Joqoraafi ahaan baddooda. Waxaa soo ifbaxday xiligan aan Baarintaankan wadno in , Dowlada Kenya ay cabiratay qayb kamida Badda Soomaaliya ee xuduuda laleh, sida ku cad qoraal ay Kenya u gudbisay UN-ta Maarso 10, 2009 oo ay ku sheegatay Jasiirado iyo qayb wayn oo badda Soomaaliya leedahay ah, kuwaasoo u dhow Raaskanbooni.... (Cilmi baarista kadib, waxay May 6, 2009 Kenya u gudbisatey QM khariidad muujinaysa in ay cabiratay dhul-badeed Soomaaliyeed oo baaxad weyn).
2. Haddii ay jiraan muran ku saabsan xadaynta qalfoofka qaaradda ee u dhexeeya laba dal oo ku yaal labada gebi ee badda ama badda deris ka ah, ama ay jiraan dhul ama muran badeed, oo la xiriira xogta la soo gudbinayo waa in Guddiga QM.... (a) Loo sheego murankaas marka ay dalalka xeebaha lehi soo gudbisanayaan xogta.
FG: Khalad ugu weyn ee DFKMG ay ka gashay shacabka Soomaaliyeed ayaa ah in ay "Muran Badeed" gelisay bad Soomaaliyeed oo aan hore wax muran ah ugu jirin. Badda Soomaaliya inta Waqooyi iyo Waqooyi-Bari ka xigta jasiiradaha lama Shaaqa weligeed muran kuma jirin ka hor xukuumadda Jabuuti loogu soo dhisay Soomaalida Janaayo 2009.
Farqaddiisa Paragraph 3aad ee Qodobka Article 83 ee xeerka Badaha Adduunka waxa uu dhigayaa: Heshiiska aan weli go'aanka laga gaarin, ee faahfaahintiisu ku qoran tahay farqadda 1aad ee isla xeerkan 83, dalalka ay khusayso, ayagoo ka duulaya wada shaqayn, waa in ay sameeyaan isku day kasta oo ay ku gelayaan heshiis nooc farasmo oo ku meel gaar ah. Heshiiskaas oo aan caqabad ku ahayn xadaynta kama dambaysta ah.
Waxaa la is weydiin karaa waa maxay faa'iidada ugu jirta DFKMG in ay ku noqoto xukuumaddii ugu horeysey ee soo marta Soomaaliya oo muran toos ah gelisa badda dhanka Raas Kambooni ka soo xigta Jasiiradaha Lama Shaaqa.
- Tixraac: CLCS/64 , bogga 21; eeg http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/commission_documents.htm
- Akhbaartii ay gudbisatey Kenya 6 May 2009; eeg www.un.org/depts/los/clcs_new/ submissions_files/ submission_ken_35_2009.htm
- Memorandum of Understanding (MoU), see http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/ submissions_files/preliminary/som_2009_mou.pdf
- Waqrqaddii loo saxiixay Cumar C/rashiid 19 August 2009, eeg http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/ submissions_files/ken35_09/som_re_ken_clcs35.pdf
- Article 76, paragraph 8,: http://www.un.org/Depts/los/ convention_agreements/texts/unclos/part6.htm
- Article 38 International Court of Justice: http://www.icj-cij.org/documents/index.php?p1=4&p2=2&p3=0
- Rule 42 and Rule :eeg http://www.un.org/Depts/los/ clcs_new/commission_rules.htm
- Annext I, Paragraph 2 (a): eeg http://www.un.org/Depts/los/ clcs_new/commission_rules.htm
- Article 5, Annex II: eeg http://www.un.org/Depts/los/ clcs_new/documents/annex2.htm
Faafin: SomaliTalk.com | November 3, 2009
Akhriste ayaa Oct 31, 2009 su�aalaha hoose soo weydiiyey SomaliTalk.com:
Jawaab: Shacabka Soomaaliyeed ayaa si qayaxan uga horyimid heshiiskaas lagu khiyaamaynayey, oo la doonayey in lagu xalaalaysto dhul badeed baaxadiisu dhan tahay 116,000 kiilomitir oo laba jibbaaran. Meelkasta oo ay tagaan madaxda DFKMG su�aasha ugu horeysa ee la weydiiyo ayaa noqotay maxaad u bixiseen badda Soomaaliya, maxaa DFKMG ku kallifay in ay heshiiskaas galaan maadaama aan wax faa�iido ah ugu jirin shacabka Soomaaliyeed ayagoo kitaabka quraanka ugu dhaartay in ay ilaalinayaan danka dadka dalka iyo diinta. Jawaabaha rasmiga ah waxaa laga sugayaa xumuumadda Federaalka kumeel gaar ah.
Weli ma muuqato meel ay DFKMG si rasmi ah Kenya ugu wargelisey in ay VIOLATION ku samaysay xuduudda Soomaaliyeed. Ra�iisul wasaaraha DFKMG hadalkiisa waxaa loo qaadan karaa hor dhac uu arrintaas ku doonayo, balse waxaa laga sugayaa in uu arrinta ka jibo keeno oo si rasmi ah heshiiskaas ay xukuumaddiisu uga laabato, adduunkana si qoraal ah oo rasmi ah ku gaarsiiso, gaar ahaan UN-ta.
Waxaa muhiim ah in shacabku fahmo in madaxweynaha DFKMG uu arrinta heshiiskaas ku tilmaamay DACAAYAD la sameeyay, halka ra�iisul wasaaruhu uu ku tilmaamay VIOLATION ay Kenya ku samaynaso Qaanuunka Caalamiga ah. Sidaas daraadeedna ay muhiimad weyn leedahay in xukuumadda laga helo mowqifkeeda oo qoraal rasmi ah.